Sebenzisa ixesha lokukhulula, unqobe ukwesaba okanye ufumane ukuzithemba, ujonge iindwendwe ezincinane ... Ngenxa yokudlala imidlalo yendima yonke into inokwenzeka! Yonke imibala yobuntwana idibanisa negama elilodwa elinamandla kwaye elicacileyo "lokuzonwabisa". Ingane inokuba lula kuba ngumongameli, umbhobho wesepha okanye inja Bird ... Kakade, kungekhona inyaniso, kodwa ngathi. Kutheni kwaye kutheni?
Impendulo ilula: uyakhula kwaye ufunda ukuqonda eli hlabathi, ngamanye amaxesha kunzima kwaye ludideka. Nangona kunjalo, umntwana ufumana indlela yakhe ekuqondeni kwakhe. Ingxenye yale nto yenzeka kwimidlalo yokudlala indima. Iminyaka engama-2-3-ixesha elithile ebomini bentsana, xa inzala yakhe ishintshiweyo kwizinto eziya kubantu, kwakunye nolwalamano phakathi kwabo. Ngoku uthanda ukungawuphenduli umbuzo malunga nendlela ikati ithetha ngayo, kodwa ukuphendukela kwisilwanyana esincinci! Umsebenzi wabazali kukumnceda kule nto. Ixabiso lomdlalo ekuphuculweni kwengqondo lomntwana kubaluleke kakhulu.
Ngamanye amaxesha umama nonina abaphazamisi umntwana ngexesha elixakeke kulo mdlalo. Kodwa akubona bonke abantwana abanako ukulula kwaye bavele bavuselele, abanye bafuna uncedo. Oku kungaphantsi kwamandla abahlobo be-karapuz, nabantwana bakhulileyo kunye, nokuba kunjalo, abadala. Ukuze senze ngokuchanekileyo, abazali abanokuthintela ukufunda iincwadi ezimbalwa okanye ukukhumbula nje oko badlala ebuntwaneni. Khumbula ukuba akusiyo yonke imidlalweni efanelekileyo yokulungiselela abantwana. Ngoko ke, umntu ongekho kwi-kindergarten, akanakwenzeka ukuba afune ukuyidlala, kodwa "kumama-ntombi" - ngokuvuya kakhulu.
Ibali elincamisayo liza kuqulunqwa kwisiganeko sokuba umntwana sele sele esondele kuye kwiminyaka emithathu okanye uwele le phawu. Ngaphambi koko, unokukhetha kuphela umfanekiso. Yingakho kude kube semkhatsini wexesha lokufundela, abantwana badlala kwimidlalo yokudlala indima, kwaye ke - kwindlalifa yebali. Ixesha langaphambili liyisiseko saloo mva. Ngoko, emva kokutyelela i-polyclinic umntwana oneminyaka emibili ubudala unokuzibonakalisa nje ngugqirha kwaye uya kuzinyamekela zonke izilwanyana. Abantwana abaneminyaka emithathu banako ukuhambisa umdlalo webali lonke apho omnye wezigulane, umzekelo, uya kulila, oko kuthetha ukuba ugqirha uya kufuna ukumqinisekisa. Unqume ukuba ube ngumqali womdlalo odlala umdlalo nomntwana? Emva koko khumbula ukuba yiyiphi eyona nto inomdla kakhulu kuye kwangoko. Ngaba umntwana usoloko ejika ekhitshini? Mhlawumbi uya kuba nomdla wokuba neqela le-tea yeentsapho kunye namadonki ayithandayo. Kukho iindlela ezininzi! Akukho ngcamango eyaneleyo? Incwadi yeT.N. Umdlalo wokudlala umdlalo wabantwana uza kubangela iingcamango. Ngombulelo kumdlalo odlala indima kulula ukuba "ulandele" kwaye unqobe ukwesaba kwabantwana. Kodwa kufuneka ukwenze ngokucophelela. Apha, ngaphandle kwincwadi ekhethekileyo ayikwazi ukwenza. Ukongeza, ukuqala imidlalo yokunyanga oyifunayo emva kokuba sele udlale ngokuqhelekileyo.
Ukhethile ngomntwana wehla kwindalo yamagama? Ngaphandle kwamacandelo encedisayo akuyi kusebenza! Qinisekisa ukuba uthabathe izinto eziqhakambisa amaqhawe: I-Little Red Riding Hood ifake ibhasikidi okanye i-headcarcar ebomvu entloko yakhe, Ingcuka iyimpumlo ebomvu ebomvu. Ukuba abalinganiswa abasemgangathweni beemidlalo, kwaye wena kunye nosana lwakho uya kuzwakalisa, uze uzame ukukopisha ilizwi kunye nesibonakaliso sabantu abalinganiswa beefeksi.
Ikhuselo livula ...
Iimpawu kunye namaphiko azinako. Emva koko, ukufihla emva kwesikrini kuyimfuneko kuphela kwimveliso yaseshashalazini yasekhaya. Ngendlela, uthanda kakhulu abantwana abaneentloni. Kubalulekile ukuba bazi ukuba akukho mntu ubonayo. Ungaqala njani umdlalo kwezinye iimeko? Maxa wambi kubonakala kunzima kakhulu. Ibinzana lemilingo liza kuhlangula: "Masidlale nawe!" Ukuthetha oku, phulaphula iimvuthu. Ngokukhawuleza uyavuya: "Ndifuna ukuqeqesha"? Vumelana kwaye ugqibe ukuba ngubani oza kuba ngumqhubi kwaye ngubani umgibeli, xubusha indlela, uyeke. Umntwana wakho wadibana nalo mbuzo ngombuzo othi: "Yintoni na?" Ukuba awuzange ulungiselele ukhetho kwangaphambili, impendulo engapheliyo kukuba: "Kwintsapho." Abazali kuphela, oomama nabantwana bafanele bakhethe kwiimidlalo. Yintoni ebonakalayo kusasa endlwini yakho? Ngalo kwaye uqale.
Kwaye nangona singenayo ukufundisa iimvumba ngokuncedisa umdlalo wokudlala indima, inikeza abazali ulwazi oluninzi malunga nokuba umntwana uhlala phi, oko akhathalelayo ngokukodwa, indlela abona ngayo ihlabathi, ngakumbi abazali bakhe. Kwaye xa unomama onodoli ekhwaza ngezwi lentombi yakho: "Hamba, ndixakeke!" - mhlawumbi, into efuna ukutshintshana ngobudlelwane nomntwana wakho. Ngokomzekelo, ngokuqhelekileyo badlala naye kwimidlalo yokudlala indima ...
I-entourage kunye neendawo ezikuyo
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba umntwana ixesha elide uphinde abuyele kwiqhawe elithile. U-Sonny usuvele, unomhla awusususanga i-cat of knight, kwaye intombi igqoke nge-wand magic ekuseni? Ngenxa yoko, umfanekiso okhethiweyo usondele kakhulu kubo. Ungandinyanzeli ukuba ndibe neengcambu. Ngokuchasene noko, sebenzisa imeko eye yaphuhliswa: inkwenkwe iyaxelelwa ngesimo sengqondo esinesigxina seentlobano zesini kwisini esilungileyo, intombazana ixelelwa malunga ne-magnanimity apho i-fairies ihambelana nabantu abakujikelezile.
Amathoyizi ekuphuhliseni abantwana
Amathoyizi enomdla kubantwana
Iingcebiso kubazali ngokukhethwa kwamathoyizi kubantwana
Iividiyo eziphuculweyo zokuphuhlisa abantwana
Inkathazo yobudala kubantwana
Ukuba umntwana akafuni ukwenza umsebenzi wesikolo
Izimbali ezivela ephepheni ezinezandla zabo
Ukwenqatshwa, ngubani omele ukhethe ukusabela kwintlekele?
I-Saladi kunye ne-shrimps "Yinandi"
Imiqulu yokuqhawula iimbobe
Iipropati ezifanelekileyo zemifuno yemifuno
Ii-Muffin ngecolethi emhlophe
Izindlela zanamhlanje zokunyanga i-herpes
Ukubumba ngobumba kubantwana
Ukulwa nokutshintsha rhoqo kwendoda
Iibhatateshi kunye nomzimba